फोटो मा अनुहार राख्न को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरु मोबाइल फोरम
फोटो मा अनुहार राख्न को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरु
डेनियल टेरासा | | Android
El अनुहार स्व्याप वा अनुहार को परिवर्तन इन्टरनेट मा फैशनेबल छ। र यो हो कि आज सबैले आफ्नो मोबाइल फोनमा अजीब स्थापित छन् फोटो मा अनुहार राख्न को लागी आवेदन। यो एक साधारण फोटो सम्पादन कार्य हो, जो कोहि को लागी उपलब्ध छ, तर सबै भन्दा धेरै रमाईलो माथि।
यी अनुप्रयोगहरूले हामीलाई अर्को व्यक्तिको साथ आफ्नो अनुहार आदान प्रदान गर्न, मास्क लगाउन, प्रसिद्ध मानिसहरु को स्टन्टमैन बन्न, हाम्रो अनुहार को विशेषताहरु लाई विकृत गर्न, एक कार्टून चरित्र मा आफैलाई रूपान्तरण गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, एक अभिनेता वा अभिनेत्री को हाम्रो अनुहार superimpose। चलचित्र, आदि संभावनाहरु को एक विशाल दायरा र खुल्ला मैदान को एक धेरै हाम्रो रचनात्मकता प्रकट गर्न को लागी।
यस पोष्ट मा हामी केहि को समीक्षा गर्न जाँदैछौं सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू कि हामी हाम्रो निपटान मा छ। उनीहरु संग र एक सानो कल्पना संग, हामी रमाईलो समय हुन सक्छ। त्यहाँ सरल र अधिक जटिलहरु छन्, तर ती सबै उनीहरुको अपील छन्। हामी उनीहरुलाई वर्णमाला क्रम मा वर्गीकृत प्रस्तुत गर्दछौं। यो तपाइँ मा निर्भर छ तपाइँ एक सबैभन्दा मनपर्ने छनौट गर्न को लागी। जे होस्, यो विचार गरेर कि त्यहाँ मात्र आधा दर्जन छन्, किन ती सबै को कोशिश नगर्नुहोस्?
1 फोटो काट्नुहोस् र टाँस्नुहोस्
4 अनुहार ब्लेंडर
5 अनुहार स्वैप
फोटो काट्नुहोस् र टाँस्नुहोस्
सरल र प्रयोग गर्न सजिलो: फोटो काट्नुहोस् र टाँस्नुहोस्
सूची मा पहिलो। र एक नाम संग उनी शंका को लागी कुनै ठाउँ छोड्छन्। यो ठीक यो अनुप्रयोग को लागी हो: को लागी फोटो काट्नुहोस् र टाँस्नुहोस्। त्यति नै सरल। यो यसको खण्ड मा सबै भन्दा राम्रो नहुन सक्छ, न त सबै भन्दा राम्रो ज्ञात, तर यो पक्कै उद्धार के यो प्रतिज्ञा गर्दछ।
मूलतः यो अनुप्रयोग के गर्छ हामीलाई छनौट र एक तस्वीर को एक विशेष भाग फसल गर्न अनुमति दिन्छ। पछि, त्यो कट आउट टुक्रा अर्को छवि, वा नयाँ पृष्ठभूमि संग सम्मिलित गर्न सकिन्छ। यो हामी चाहेको कुनै पनि छवि संग गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह अनुहार र अनुहारहरु संग, जो तरीका बाट सबैभन्दा रमाईलो छ।
एप्लिकेसनमा केहि उपकरणहरु छन् जस्तै जुम गरेर छवि लाई नजिक ल्याउन र फसल एकदम सही छ। यो धेरै कामहरु गर्दैन Photoshopतर यो सुविधाहरु को एक रोचक गुच्छा प्रदान गर्दछ कि हाम्रो भाग मा एक सानो रचनात्मकता संग धेरै प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरल, तर कुशल। र सबै भन्दा माथि, बिल्कुल नि: शुल्क। तपाइँ अरु के सोध्न सक्नुहुन्छ?
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: फोटो काट्नुहोस् र टाँस्नुहोस्
Cupace: रमाईलो आवेदन फोटोहरु र धेरै मा अनुहार राख्न को लागी।
यस अनुप्रयोगको पूरा नाम हो Cupace - कट र अनुहार फोटो टाँस्नुहोस्। नाम स्पष्ट रूप मा बताउँछ कि हामी के को लागी यो प्रयोग गर्न को लागी सक्षम हुन जाँदैछौं: कुरा बाट जान्छ एक तस्वीर मा अनुहार काट्नुहोस् र टाँस्नुहोस्। मेम्स सिर्जना गर्न र अन्य उपयोगिताहरु को बीच, तपाइँको फोटोहरु को लागी एक रमाईलो स्पर्श दिन को लागी आदर्श।
सबैभन्दा धेरै प्रयोग समारोह एक तस्वीर मा अनुहार स्वैप गर्न को लागी एक अनुहार वा यसको भाग काट्नु र त्यसपछि अर्को फोटो मा टाँस्नु हो। साथै, तपाइँ पाठ र अन्य विवरण जस्तै emojis र प्रभावहरु जोड्न सक्नुहुन्छ। यो एक काट्ने मोड, एक प्रक्रिया हो जसमा आवेदन हामीलाई एक म्याग्निफाइ glass्ग गिलास (जुम) र लाइन को विस्तृत चित्र को लागी पछ्याउन को लागी धन्यवाद मा मद्दत गर्दछ। काटिएका अनुहारहरु लाई स्वचालित रूप मा एक अनुहार ग्यालरी मा सुरक्षित गरीन्छ ताकि उनीहरुलाई अन्य फोटोहरुमा पुन: प्रयोग नगरीकन पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, Cupace हामीलाई «प्रतिलिपि-टाँस्ने the र को परिणाम बचाउन अनुमति दिन्छ सामाजिक सञ्जाल मा उनीहरुलाई साझा गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम, पथ, फेसबुक, लाइन, Whatsapp, टेलिग्राम, आदि जस्तै।
छोटो मा, एक सरल तर शक्तिशाली फोटो सम्पादन उपकरण। यो अनुप्रयोग हाल नि: शुल्क छ र यो APKFab वा गुगल प्ले मा एन्ड्रोइड 4.1+ मा डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: कपेस
धेरै यथार्थवादी अनुहार रूपान्तरण: FaceApp
धेरै लोकप्रिय र संसार भर मा ज्ञात, FaceApp आईओएस र एन्ड्रोइड द्वारा विकसित को लागी एक फोटो र भिडियो सम्पादन अनुप्रयोग हो वायरलेस ल्याब, रूस मा आधारित एक कम्पनी। यो विलक्षण आवेदन सक्षम छ धेरै यथार्थवादी मानव अनुहार रूपान्तरण उत्पन्न। तेसैले हामी यो फोटो मा अनुहार राख्न को लागी एक आवेदन को रूप मा हाम्रो सूची मा समावेश गर्न सकेन।
यो मुस्कान बनाउन अनुहार रूपान्तरण, यो कान्छो (वा बुढो) देखो बनाउन, वा यहाँ सम्म कि सेक्स परिवर्तन को चमत्कार प्राप्त गर्न। यी हुन् केहि चीजहरु कि FaceApp हामीलाई गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। अन्य रोचक विकल्प मेकअप, कपाल शैली र कपाल को रंग, टैटू, लेन्स धमिलो र पृष्ठभूमि, धेरै अन्य को बीच मा बिभिन्न प्रकार को लागू गर्न को लागी हो।
2017 मा शुरू गरीएको, FaceApp चाँडै ज्वलन्त सफलता हासिल। जे होस्, उनी पनि संग सम्बन्धित कठोर आरोप को विषय थिए प्रयोगकर्ता डाटा गोपनीयता को उल्लंघन। यस्तो देखिन्छ कि फेसएपले प्रयोगकर्ताहरुको फोटोहरु आफ्नो सर्भर मा भण्डारण गरेको छ र उनीहरु लाई व्यावसायिक उद्देश्य को लागी प्रयोग गरीएको छ, किनकि यो यसको प्रयोगकर्ताहरु द्वारा स्वीकार गरीएको शर्तहरुमा भनिएको थियो।
तर यसको बावजूद FaceApp अझै पनी यसको क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरु मध्ये एक हो। यो धेरै राम्रो संग काम गर्दछ र लगभग अनन्त संभावनाहरु प्रदान गर्दछ। यो एक प्रयास लायक छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: FaceApp
अनुहार ब्लेंडर: फोटो मा अनुहार राख्न को लागी आवेदन।
संकेत: अंग्रेजी मा, कि रसोई उपकरण कि मिश्रण र हिलाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ भनिन्छ ब्लेंडर। र साँच्चै, त्यो मूलतः यो के गर्छ अनुहार ब्लेंडर अनुहार छविहरु संग: मिश्रण।
यो एक सरल र प्रयोग गर्न सजिलो इन्टरफेस छ। यो एक महान पुण्य हो, किनकि यो घण्टा खर्च गर्न को लागी यो कसरी काम गर्दछ र यसको चाल को खोज गर्न को लागी आवश्यक छैन। यसको सादगी यसको मुख्य गुण हो। वास्तव मा, फेस ब्लेंडर को उपयोग गर्न को लागी तपाइँ केवल एक छवि मा क्लिक गर्नुहोस् र संयोजन को कार्यान्वयन गर्न को लागी एक टेम्प्लेट चयन गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि, अनुप्रयोग आफैंमा छवि को कोण समायोजन को वांछित फ्रेम फिट गर्न को लागी ध्यान दिनेछ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: अनुहार ब्लेंडर
तपाइँको फोटो मा अनुहार स्वैप गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरु मध्ये एक: अनुहार स्वैप
एक आवेदन फोटो मा अनुहार थप राख्न को लागी, यद्यपि वास्तविकता मा यसको स्टार समारोह को लागी छ अनुहार अदलाबदल. त्यो हो, अनुहार अदला बदली।
यो अपरेशन गर्न को लागी, बस एक प्रारम्भिक फोटो जसमा एक अनुहार देखिन्छ चयन गर्नुहोस् (सावधान रहनुहोस्: यो काम गर्न को लागी, छवि मा छ भन्दा बढी अनुहार हुनु पर्छ)। एक पटक यो गरिसकेपछि, तपाइँ अन्य फोटोहरु छनौट गर्न को लागी जहाँ तपाइँ अर्को अनुहार चिन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई निकाल्नुहोस् र पहिलो रोजाईएको फोटो मा रोप्नुहोस्।
यद्यपि यसको परिणाम अनुहार अदलाबदल उनीहरु भव्य छन् (यो यो विशेष प्रकार्य मा सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरु मध्ये एक हो), सत्य यो हो कि सामान्य अनुप्रयोग केहि सीमित छ, किनकि यसले तपाइँलाई यो भन्दा धेरै गर्न को लागी अनुमति दिदैन। साथै, यो ध्यान दिनु पर्छ कि अनुहार स्वैप एक उपकरण हो विशेष गरी एन्ड्रोइड प्लेटफर्म को लागी.
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: अनुहार स्वैप
MSQRD को प्रयोग गरी तपाइँको अनुहार परिवर्तन गर्न छाला को धेरै
यो अनुहार प्रतिलिपि र टाँस्न को लागी आवेदन छैन, न त यो एक हो अनुहार अदलाबदल। तर यो एक ठूलो गल्ती हुनेछ यो हाम्रो सूची मा समावेश नगर्नुहोस्। विशेष गरी जब यो द्वारा अधिग्रहण गरीएको थियो फेसबुक.
MSQRD अंग्रेजी शब्द को व्यञ्जन अक्षर हो Masquerade, जसको अर्थ "मास्क गरिएको बल" वा "पोशाक बल" हो। यसको मुख्य प्रकार्य हाम्रा तस्बिरहरुमा देखा पर्ने अनुहारहरुमा हास्यास्पद मास्क को एक श्रृंखला लागू गर्न को लागी हो। वा तपाइँको आफ्नै अनुहार मा, तपाइँको फोन को क्यामेरा को उपयोग गरेर।
कसरी यो अनुप्रयोग को उपयोग गर्न को लागी सरल हुन सक्दैन: हामी मा हाम्रो आफ्नै अनुहार मा क्यामेरा फोकस सेल्फी मोड र MSQRD लागू हुन्छ वास्तविक समय प्रभावहरु। हामीले गति मा राम्रो ट्र्याकि highlight हाइलाइट गर्नु पर्छ, धन्यवाद जसको लागी हामी सार्न सक्छौं, इशारा गर्न सक्छौं र चुनेको मास्क मुनि बोल्न सक्छौं कम से कम गुणस्तर मा असर नगरीकन।
अर्कोतर्फ, यो भनिएको छ कि फोटो मा अनुहार राख्न को लागी यो अनुप्रयोग को नतीजा धेरै हद सम्म हाम्रो फोन को क्यामेरा को गुणस्तर र हामी संग पल्स मा निर्भर गर्दछ। यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि यो एक नि: शुल्क आवेदन र अत्यधिक यसको प्रयोगकर्ताहरु द्वारा मूल्यवान छ। के तपाइँ यो रमाईलो मास्क गरिएको बलमा सामेल हुनुहुन्छ?
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: MSQRD
Snapchat, फोटो र धेरै धेरै मा अनुहार राख्न को लागी आवेदन
सम्भवतः त्यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय फोटो अनुप्रयोग। वास्तबमा, Snapchat यो पहिलो कि 2011 मा फिर्ता, यो आला बजार संग आफ्नो भाग्य कोसिस गर्ने हिम्मत भएको थियो। यसको सफलता तुरुन्तै थियो र चाँडै नै डाउनलोड को लाखौं ग्रह वरिपरि फोन मा दर्ता गरियो। र युवाहरु को बीच मात्र होइन।
Snapchat अनुहार परिमार्जन र आदानप्रदान गर्न सुविधाहरु को एक धेरै प्रदान गर्दछ: फिल्टर, मास्क, परिष्करण ... संभावनाहरु लगभग अनन्त छन् र परिणाम उल्लसित छन्। यसको अतिरिक्त, यो हामीलाई सामाजिक नेटवर्क को माध्यम बाट हाम्रा सबै सम्पर्कहरु संग हाम्रो रचनाहरु लाई साझा गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
Snapchat प्रयोगकर्ताहरु फोटो लिन र भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तर पाठ र चित्र र अन्य प्रभावहरु लाई जोड्नुहोस्। छविहरु र भिडियोहरु लाई बनाईएको भनिन्छ तस्वीरहरु। प्रयोगकर्ताहरु छनौट गर्छन् कि उनीहरु कहिले सम्म देख्न सक्छन्। पछि, ती प्राप्तकर्ता को स्क्रीन बाट गायब र स्थायी रूप बाट सर्वर बाट मेटाइन्छ। तपाइँ भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रत्येक स्नैप यो रमाईलो र quirky "अल्पकालीन कला।" को एक प्रदर्शन हो।
Snapchat एक नि: शुल्क अनुप्रयोग दुबै एन्ड्रोइड र आईओएस को लागी उपलब्ध छ। ती मध्ये एक कि सबैलाई आफ्नो मोबाइल मा हुनु पर्छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: Snapchat
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » Android » फोटो मा अनुहार राख्न को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरु
सबै विषयहरु को 20 सर्वश्रेष्ठ HBO चलचित्रहरु
कसरी तपाइँको एन्ड्रोइड मा गुगल क्रोम बुकमार्क निर्यात गर्ने